နာရီပိုင်းအတွင်း ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ ကြည့်ရှုသူ သန်းချီရှိခဲ့တဲ့ ဘင်ဂျင်မင်ဆုမ်းရဲ့ ဒုတိယမြောက်သီချင်း(ရုပ်သံ)VIDEO – Zartiman
နာရီပိုင်းအတွင်း ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ ကြည့်ရှုသူ သန်းချီရှိခဲ့တဲ့ ဘင်ဂျင်မင်ဆုမ်းရဲ့ ဒုတိယမြောက်သီချင်း(ရုပ်သံ)VIDEO
မြန်မာအိုက်ဒေါက ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းက Thanks to the whole Team. Thanks to the Composer and the Musicians and ofcourse the Harmonies. This is all about Summers. Thank You Loves. ” လို့ ပရိတ်တွေနဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်မြောက်လာအောင် ကူညီပေး ကြတဲ့ သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
မနေ့က သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့လေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဘင်ဂျမင်ဆုမ်းရဲ့ ဒုတိယမြောက်သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ “ဟိုဘက် အိမ်က ကောင်မလေး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဘင်ဂျမင်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေ လည်း နားဆင် ကြည့်ရှုခံစားပြီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သီချင်းလေးရော သရုပ်ဆောင်မှုမှာပါ အပြစ်ပြောစရာမရှိဘဲ ပရိသတ်တွေသဘောကျနေခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းလေးကတော့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး နာရီ ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ ချီတဲ့အထိရှိနေခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာအိုကျဒေါက ဘငျဂမြငျဆုမျးက Thanks to the whole Team. Thanks to the Composer and the Musicians and ofcourse the Harmonies. This is all about Summers. Thank You Loves. ” လို့ ပရိတျတှနေဲ့ သီခငျြးလေး ဖွဈမွောကျလာအောငျ ကူညီပေး ကွတဲ့ သူတှကေိုကြေးဇူးတငျကွောငျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနေ ဖျောပွထားပါသေးတယျ။
မနကေ့ သွဂုတျလ (၁၈)ရကျနလေ့ေးမှာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော ဘငျဂမြငျဆုမျးရဲ့ ဒုတိယမွောကျသီခငျြးလေးဖွဈတဲ့ “ဟိုဘကျ အိမျက ကောငျမလေး” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဘငျဂမြငျရဲ့ ဒုတိယမွောကျထှကျရှိလာတဲ့ သီခငျြးလေးကို ပရိသတျတှေ လညျး နားဆငျ ကွညျ့ရှုခံစားပွီးကွမယျလို့ထငျပါတယျ။
သီခငျြးလေးရော သရုပျဆောငျမှုမှာပါ အပွဈပွောစရာမရှိဘဲ ပရိသတျတှသေဘောကနြခေဲ့တဲ့ ဒီသီခငျြးလေးကတော့ ထှကျရှိလာခဲ့ပွီး နာရီ ပိုငျးအတှငျးမှာတငျ ကွညျ့ရှုသူ သနျးနဲ့ ခြီတဲ့အထိရှိနခေဲ့ပါတယျ။
ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် ကပြလိုက်တဲ့ ခြူးလေးရဲ့ ဗီဒီယို
သဘာဝအလှ တရားတွေကိုမြင်နေရတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့အမိုက်စားဗီဒီယို
ကိုဗစ်ကာလ အိမ်မှာနေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရင်း အမိုက်စားပို့စ်တွေပေးနေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ(ဗီဒီယို)
အနားမှာရှိ ချင်တယ် ဆိုပြီး အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်